Bq Verne, icwecwe elinobizo lwabafundi | I-Androidsis
antocara | | Ezinye izixhobo, Amacwecwe e-Android
Luarna Enye yezona zipapasho zikhulu / iivenkile zedijithali eSpain isinika isixhobo esitsha esibizwa ngokuba Bq Verne esivumela ukuba siyisebenzise zombini njenge-ereader okanye njengethebhulethi yemisebenzi ye-multimedia enje ngokubukela iividiyo, ukudlala umculo, ukulawula ii-imeyile, imifanekiso, ukukhangela kwiwebhu, njl ... Konke oku kusuka kwixabiso le-149 yemodeli esisiseko .
El Bq Verne Yithebhulethi ye-7-intshi enohlobo lwesikrini se-LCD esine-pixels ezingama-800 × 480. Esi sisixhobo, ngenxa yemilinganiselo yaso, siyaphatheka kwaye kulula ukusiphatha, kunye nokuba nesayizi efanelekileyo kakhulu yokufunda iincwadi zedijithali.
Ibandakanya a Iprosesa ye-Rockchip 2818 (i-ARM 9 kwi-650 Mhz + DSP kwi-550 Mhz) Ngememori ye-RAM ye-256 Mb.Iinkcukacha azikhokeleli, kodwa zininzi izinto ezinokusebenza ngesixhobo. I-Bq Verne ibandakanya imemori yokugcina ye-8Gb enokwandiswa ngamakhadi amancinci e-SD.
Ine-Wi-Fi 802.11 b / g yokunxibelelana, ukuphuma kwe-HDMI, izibuko elincinci le-OTG port kunye ne3,5 mm yokukhutshwa komsindo kwii-headphone. Ayinayo i-accelerometer, izithethi kunye nekhamera ye-1,3 Mpx nokuba.
Njengoko besesitshilo, yithebhulethi elula kwaye ubunzima bayo kubandakanya ibhetri yi-469 gram enobukhulu be-215x125x17mm.
Android 2.1 Ikhona kule thebhulethi njengenkqubo yokusebenza kwaye ngokweencoko kunye nabo banoxanduva bafunda uhlaziyo olunokubakho. Izicelo zikaGoogle kunye nokufikelela kwiNtengiso ye-Android azikho, kukho ezinye iindlela zentengiso eziza kusebenza njenge slideme.
Iyahambelana nobuninzi beefomathi, zombini ividiyo, iaudiyo, umfanekiso kunye nesicatshulwa, nesikukufundela oko. Iifomathi ezinje nge-epub, fb2, pdf, mp3, ogg, jpeg, rmvb, mkv, mov, phakathi kwezinye zezinye zeefomathi.
Ibhetri ekhoyo isinika ukuzimela kweeyure ezili-9 zidlala umculo, iiyure ezingama-7 xa kudlalwa ividiyo kunye neeyure ezi-5 kukhangelo lwewebhu.
El Ithebhulethi / ereader Bq Verne Ithengiswa kwiimodeli ezininzi kuxhomekeke kwiiphakheji esizikhethayo. Imodeli esisiseko yile inazo zonke iimpawu ezixoxwayo ukuza kuthi ga apha kwaye inexabiso le- € 159, imodeli ye-3G iyafana naleyo yangaphambili, ukongeza uqhagamshelo lwe-3G ngexabiso le- $ 219.
Kunye nethebhulethi, ikhadi elincinci le-SD libandakanyiwe kunye nokufakwa kwezihloko ezingaphezulu kwe-100 zokufunda kwaye ngokuqinisekileyo ukubanakho ukufikelela kwivenkile yeencwadi ekwi-Intanethi ukusuka apho unokuthenga okanye ukhuphele ezinye iincwadi.
Ukuthathela ingqalelo into yokuba sithetha ngethebhulethi ekumgangatho ophakathi kunye nescreen sokumelana, indlela yokuziphatha kwesixhobo intle kakhulu, kwaye umgangatho / ukusebenza / ixabiso lentengo linomdla kakhulu. Iphepha elisemthethweni lesixhobo yile yi apho unokuyithenga khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Bq Verne, icwecwe elinobizo lwabafundi
Amarhe esifuna ukuzaliseka: ithebhulethi ye-HP Palm ngoMatshi. U-2011 ujongeka elungile kwihlabathi leetafile, ekugqibeleni siqala ukubona izimbangi zokwenyani kwi-iPad kwaye ngaphezulu kwako konke ukhuphiswano. http://bit.ly/9W0PBX
Molo, kutshanje ndithenge iVerne 3g kwaye okwangoku ihlangabezana nazo zonke izinto ezilindelweyo ngaphakathi koqwalaselo kunye nokusikelwa umda kuyilo. Kum inenqanaba elungileyo lomgangatho / amaxabiso kunye nescreen sokuchukumisa, nangona siphendula, siphendula ngokukhawuleza okukhulu.
Ukunqongophala kokufikelela kwiNtengiso kukuphazamisa okuncinci, kodwa kuyahlawulwa ngokubakho kokusebenzisa ezinye izicelo. Nangona kunjalo, izimvo zam zikhuthazwa yinkonzo yabathengi ebalaseleyo endiyifumeneyo nayo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo kwinkampani. Ndicinga ukuba kufanelekile ukwamkela izinto xa abaphengululi bephendula, njengoko kunjalo.
UJuan Ponce sitsho
Molo, ndinenguqulo ye-3g kwaye i-intanethi isebenza ngokugqibeleleyo, ngaphandle kwengozi, xa ndisebenzisa i-sim ngesicwangciso sedatha yam yemististar, kunjalo nange-wifi. Idlala iimuvi kakuhle kakhulu, ungadlala iimuvi, iifoto, umculo okanye uvule iifayile ezivela kwi-pendrive kwaye ungaqhagamshela imouse nge-usb kwaye kwangoko isikhombisi sibonakala sisebenza ngokugqibeleleyo. Ibhetri ihlala ixesha elide kunelaptop, ndithetha phakathi kweeyure ezi-5 ukuya kwezi-9 kuxhomekeke ekusetyenzisweni. Imakethi ye-androi iyaphoswa kodwa njengoko uNoeki esithi zikhona ezinye iindlela ezinje ngeSilayidi okanye iApktoide. Nangona kunjalo, kuya kuphucula kakhulu ukuba ifro ye-androi inokufakwa.
Ngokubanzi ndonwabile kwaye ndiyacebisa kakhulu emva kwamava am amabi nge-Eken M001.
Phendula kuJuan Ponce
Kulungile! Ndithenge i-bq verne 3G kwaye ndiyabona uthi ubufowuna. Ndicinga ukuba kungenxa yento ethile endingakhange ndiyisebenzise okanye ndiyazi… kodwa ukuba ndisebenzisa i-wifi, kuya kufuneka ndicime ikhadi le-sim kwaye ukuba ndisebenzisa i-sim khadi, ndiyeke ukuba ne-wifi. Ngaba oku kunjalo okanye ndenza into engalunganga?
Kwelinye icala, bendicinga ukuba ndizokwazi ukufowunela nge-sim khadi, kodwa ndicinga ukuba ngenxa yokuxakaniseka, andazi ukuba ndenze njani. Ungandinceda? Ndingabiza njani nge-sim khadi?
Phendula impendulo kwi-eki
Nceda undixelele ukuba kuya kufuneka ndiyifake ukuze ndikwazi ukubona iividiyo ze-youtube.
Molo uEva, de ube une-Android 2.2 (Froyo) awuyi kuba nakho ukujonga ifleshi kwi-android yakho, yonke into oyifundayo okanye oyivayo ukuba ingena ngo-2.1 ayiyonyani….
Ngendlela, ndingathanda ukubonisa into enye malunga nenkampani yaseLuarna, ndifuna ukuyenza icace gca ukuba andinanto yakwenza nale nkampani kwaye into endiza kuphawula ngayo iya kuba njengomthengi. Le nkampani ilungile, inenkonzo ebalaseleyo kubathengi kwaye iyabonakala xa kukho iingxaki, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba uza kubamba into kule nkampani ndicebisa ibq Darwin, eneempawu ezifanayo neVerne Plus kodwa ene-8,4 Isikrini ″… Sikhohlakele… Ukuba unomdla kwividiyo, kwi-intanethi, ekufundeni, njl., ngokuqinisekileyo lolona khetho lufanelekileyo…
Molo zinjani izinto? Ndinikwe leKrisimesi itafile ye-bq verne ye-8gb yememori yangaphakathi ethengwe kwi-intanethi, iza ngaphandle kwayo nayiphi na incwadi ye-elektroniki, izisa ezi zicelo zibini ukuze zikwazi ukufunda iincwadi, kodwa xa ndingena kwiFbReader kwa iscreen esifanayo Kwividiyo, apho ndingazi ukuba ndingaphuma njani kwaye ndikwazi ukufunda iincwadi, khange sikwazi ukufunda naziphi na iincwadi, kuba no-Aldiko andikwazi.
Ndiyabulela kakhulu. Ndingavuya ukuba undiphendule kwakamsinya.
Konke okugqibelele. Patry
jonga kwiphepha http://WWW.mibqyyo.com
Umbuzo wam ulula kakhulu, ndingathanda ukubona umabonwakude a la carte, clan and series yonkis, kodwa akukho anti wakho. mhlawumbi nge-DOLPHIN?
ayaziwa ukuba i-Android 2.2 izakuvela nini kule modeli ??? Ndicela unethemba lokuphendula !!
Sele unayo iintsuku, ndiyathemba ndishiywe lixesha hahaha
Ndingathanda uncedo oluncinci nge-bq verne yam yokukhuphela ii-ebook kwi-pc. Ndineedigital editions ezifakiweyo kwaye iincwadi ndizithengile, kodwa xa ndizigqithisela kwi-bq indixelela ukuba zikhuselwe yi-drm. Ndingayigunyazisa njani i-bq yam? Ndine-id ye-adobe kwaye nangona ndidibanisa zombini izixhobo azindivumeli ukuba ndifunde iincwadi. Kukho amaxesha apho inkqubo yedijithali, ubona i-icon encinci ye-bq. kodwa ngoku andiboni. Ndiyabulela ngalo naluphi na uncedo
Ndingayifumana isaps kwisicwecwe sam? Ndiyikhuphele emarikeni, kodwa indinika iingxaki, kuba ndingenza ntoni? Ndine verne bq tablet, enkosi
Molweni nonke!!! Ungayikhuphela phi i-froyo? Ngaba sithetha ngeverne ukoma okanye iverne dibanisa? kuba ndine-verne ... imibuliso!
USara M2 sitsho
Molweni nonke, ngaba niyasazi isigqubuthelo se-bq Verne esingeyiyo neoprene? Ndithe ndakuyithenga ndabona i-neoprene, kodwa ndingathanda into eqinileyo efana ne-lectern…. Enkosi!
Phendula uSara M2
Ndifaka ikhadi lam le-siim kwaye andilifumani kwiscreen.